Su'aalo Iyo Jabaabo Ku Aadan Jaceylka? - iftineducation.com
Su’aalo Iyo Jabaabo Ku Aadan Jaceylka?
aadan21 / April 26, 2012
iftineducation.com – Jaceylka ka hadlidiisa ma’ahan wax marnaba u baahan in laga nasta ee waa wax mar walba ladonaayo in laga hadlo sida ay tahayna loo wada abaaaro xal kiisa ayaa badan qasaara hiisana waa uu lee yahay hadii ruuxa aad doneeso kula fahmi waayo ama kula garan waayo waa ay fiican tahay in aad hesho had iyo jeer ruux aad isla fahan teen jacelka.
Jaceylka waa cudur malee yahay daawo?
Jacelka Wax si fudud lagu ilaabi karo miyaa?
Jaceylka Samir ilaa iyo intee ah ayuu donayaa?
Jacelka si fudud miyuu kugu soo wajihi karaa?
ILaa iyo intee ayaa la isla wadi karaa jaceylka Qayaas ahaan?
Jawaabaha ku aadan su’alahaas sida ay kala noqonayaan ama ay kala yahiin ayaa waxay tahay sidaan soo socoto waxayna wanaagsan tahay in aanu u fahano sida ay tahay jawaabaha intaas laga bixinaayo.
Jaceylka waa sax waa cudur waa uu lee yahay daawo daawadiisana waxay tahay ruuxa nafta ay doneyso in ay hesho ayaa daawa u ah xalkana hal kaas ayuu ku jiraa ama laga helayaa.
Jacelka ma’ahan wax sifudud lagu ilaabi karo marnaba waa ay adag tahay sid fudud in aad ku ilowda muda badan ayey kugu qaada neysaa jaceylka dhiba uu kuu geestay in aad ku ilowdo ama ay kaaga baaba aan xanunka uu kugu reebay.
Jacelka samir badan ayuu u baahan yahay mid qiyaas leh ma;ahan waa mid aad u badan jacelka ayaaba ka dhisan mid samir leh in uu ahaado hadii samir uusan ku jirin jacelkaas waa ay adag tahay sida mar kaas uu ugaaro heer wanaagsan jacelkaas.
Haa jacelka sifudud waa uu kugu soo wajihi karaa oo waad ku qaadi kartaa lakin si fidud kuma ilaabi karto wax walba aad sameeso waqti ayuu kugu qadanayaa in aad ku ilowda dhibka uu kuu geestay.
Jaceylka xili maqcuul ah oo wanagsan ayaa loo baahan yahay ama ladonayaa in ay ahaadaan is fahan iyo ka hadlis mustaqbal sida loo wada dhisan lahaa lakin muda aad u badan ayuu u dhaxenayaa oo aanan laqayaasi kareyn jacelka jiri taan kiisa waxaasa loo baahan yahay sida is fahanka iyo jacelka loo sii xoojin lahaa mar walba looga sii qaadi lahaa hormarka jacelka heer wacan i gaari lahaa ama loo wada gaar siin lahaa in lagu wada dadaalo.
Sheeko Dhab Ah Wiil Safarkiisa Hurda Latagtay Ku Wayaay
Dhafarka Badan Oo Laga Qaado Xanuuno Halis Ah.